Izakhiwo eziwusizo nokusetshenziswa kwe-physalis
Physalis iyisitshalo esimangalisayo ngempela. Ngezinye izikhathi kwenzeka ukuthi ikhula kumuntu ensimini noma engadini, futhi akayazi ngisho nokuthi izithelo ziyakwelapha, zihlwabusayo, futhi zibheke ukuthi i-physalis ibe uhlobo lokuzijabulisa. Kulesi sihloko sizokhuluma ngezinto eziwusizo kanye nokusetshenziswa kwe-physalis.
Eqinisweni, lesi sitshalo siyaziwa ezindaweni eziningi njengokuhlobisa, njengoba nje uhlobo olufanayo lwe-physalis lukhula lapha, kodwa mayelana nabanye abantu futhi awuqageli. Eqinisweni, ungathola izinhlobo ezahlukene ze-physalis, ukuhlobisa, isibonelo, ngendlela enhle kakhulu nenhle kakhulu. I-berry efihliwe egobolinini elibomvu elikhanyayo elifana nelanga le-Chinese lamaphepha. Igama le-physalis livela ngesiGreki esithi "fizza", okusho ukuthi "bubble".
Kunengqikithi engaqondakali kodwa enhle ngalesi sitshalo. Udrako owesabekayo wagwinya ilanga, ngokungazelelwe kube mnyama emhlabeni jikelele, futhi konke ukuphila kwaqala ukushabalala, kodwa kwakukhona intukuthelo enjalo eyayifisa, nganoma iyiphi indlela, ukunqoba udrako futhi ubuyele ilanga emhlabeni. Ngakho waya ukuyofuna i-monster wayithatha ilanga. Ngokushesha wathola futhi wabulala udrako, ngaleyo ndlela ekhulula ilanga, elaqala ukwenyukela ezulwini. Ukukhanya okwakushisa ilanga kwakumhlophe kakhulu kangangokuthi leli gama lavala amehlo ngesandla sakhe, lahla ilanga emhlabathini. Wahlala eqinisiwe, kodwa waba yisiqephu sezimpawu ezikhanyayo ezibomvu ezifakwe kwesinye isiqu. Ngakho-ke, inganekwane ithi, futhi physalis yabonakala emhlabeni.
Kukhona futhi i-physalis yamaberry nemifino. Kuyinto evamile ngathi ukubiza imifino into edlayo, njengoba ingaphekwa ngezindlela ezihlukahlukene, futhi ihlangene ngokuphelele nezitsha eziningi. I-berry physalis nayo ihle kakhulu, kodwa imnandi kakhulu. I-physalis ehlobisa, akuyona into efanele yokudla ngoba iyakuthanda ubuhlungu futhi ikhulile kuphela ngobuhle futhi kufanele kuthiwa yenza umsebenzi wayo kahle: i-physalis ingahlobisa ngokuphelele indawo lapho ikhula khona, kungakhathaliseki ukuthi ingadi , ingadi noma igumbi.
Kuvame ukukholelwa ukuthi izinhlobo ezidliwayo ze-physalis zafika kithi ezivela eMelika, njengoba ngempela, ezinye imifino yomndeni we-nightshade, isibonelo, utamatisi. Ayikwazi ukubekezelela amaqhwa, kodwa ikhula kahle ezindaweni eziningi zaseRussia, ngisho naseMpumalanga Ekude.
Manje mayelana nezinzuzo nezakhiwo ze-physalis. Imithi yendabuko iye yafakazelwa ukuthi i-physalis iyasiza kakhulu, kodwa ayikho inzuzo yezomnotho ezweni lakithi, njengokwesibonelo, eNingizimu neMelika Ephakathi, lapho kungenye yemikhiqizo yokudla eyinhloko unyaka wonke.
Izakhiwo eziwusizo ze-physalis, njengezinye izitshalo eziningi, zilele ekubunjweni kwayo. Inamanzi amaningi ahlanzekile emvelo. Kukhona amaprotheni, amafutha, ama-carbohydrate kanye ne-fiber, kukhona amavithamini C no-A, kanye namaminerali amaningi: i-phosphorus, i-magnesium, i-calcium, insimbi, i-sodium, i-zinc kanye nenani elikhulu le-potassium.
E-fizalis kukhona amakholori ambalwa, angaphezu kwama-kcal amathathu ngamagremu angu-100, kodwa, ngaphandle kwalokhu ngenhla, kunezinto eziningi eziwusizo. Futhi, okokuqala, lawa ama-acids e-organic: i-lemon, i-apula, iwayini, i-amber, ikhofi, i-feric kanye ne-synapic; i-pectin, ushukela, i-mucus, i-tanins, i-carotenoids, i-quercentin, i-steroid kanye nama-dyes.
Ngaphezu kwalokho, ku physalis iqukethe i-lycopene - into engokwemvelo enikeza izithelo ezifana nombala ocacile. I-Lycopene ihlukana nomphumela wayo we-antioxidant, okuyivumela ukuba isetshenziswe ukuvimbela umdlavuza. Ngaphandle kwe-lycopene, i-physalis iqukethe i-alkaloid fizalin. Iyakuthanda umunyu futhi iqukethe izithelo ngamanani amancane, kodwa kubonga kuye kubantu ukuthi lesi sitshalo sitholile igama lobuthongo obulele.
Ngenxa yalowo mhlaba we-physalis emithi yokwelapha, usebenza ngokuyisisekelo njenge-analgesic, i-hemostatic, i-anti-inflammatory, i-diuretic kanye ne-agent ye-choleretic. Izithelo zikaFizalis zisetshenziselwa ukubuyiselwa okuvamile, nge-cholecystitis, isifo somfutho wegazi kanye nezifo zamathunjini.
Ngenxa yokuthi i-pheasant iqukethe inani elikhulu le-pectin, lesi sitshalo singasetshenziselwa ukudla okunomsoco. I-Pectin ingasusa izinsimbi ezisindayo, i-radionuclides, ne-cholesterol eyengeziwe emzimbeni wethu.
I-Physalis isetshenziselwa ukuphatha izifo ezihlukahlukene. Nge-dermatitis ne-diathesis, ngokwesibonelo, yenza i-compress nge-decoction ye-physalis, futhi i-decoction yalesi sitshalo isetshenziselwa futhi inamazinyo njenge-rinse.
Amafutha we-Phisalysis asetshenziselwa ukuvuvukala kwezikhumba ezihlukahlukene. Ukwenza, izithelo ezomile ziyashiswa, futhi umlotha wazo uhlanganiswe namafutha yemifino.
Amafutha angalungiswa ngenye indlela. Izithelo eziyishumi ze-fizalis kufanele zichotshozwe, uthele ama-40 ml wamafutha omnqumo, uqhubeke izinsuku ezingu-20, bese ukhula. Esikhathini esizayo, la mafutha angasetshenziswa njengendlela yokwelapha ukulimala, nge-rheumatic nezinye izinhlungu.
Ukusetshenziswa kwe-physalis kuvamile emithini yezizwe zamanye amazwe amaningi. E-Asia Ephakathi, ngokwesibonelo, ngosizo lwawo, uphatha i-anemia, umfutho wegazi ophakeme nokuqothulwa kubantu asebekhulile. Ngomfutho wegazi ophakeme, itiye, ekhishwe yizimbozo ezomile, noma amagobolondo, amaqabunga nezithelo zesitshalo, nakho kuyasiza.
EBulgaria, i-decoction evela kulesi sitshalo iphathwa ngamathumbu nesisu, i-jaundice ne-hemorrhages, futhi izinkinga zokugcoba nezinyosi zisetshenziswe njenge-diuretic.
E-Tajikistan, kusukela ejusi le-physalis, yenza umuthi we-stomatitis ne-angina ezinganeni. Izithelo zeKashitza ngejusi lawo elisha laleli thumba ngobisi ekushiseni okuphansi, bese unikeza izingane. Abaphulukisi bezwe baqinisekisa ukuthi i-laryngitis ingelashwa ezinsukwini ezingu-4-5, isinika isiguli 4 izipuni zalesi sixube izikhathi ezine ngosuku. Ukubuyiselwa emva kwalokhu kuzophelela, futhi ngokuvimbela kunconywa ngezikhathi ezithile ukuqhubeka ukuthatha le nhlanganisela.
U-Avicenna weluleka ukusebenzisa izithelo zalesi sitshalo ukufaka ngaphandle, ekwelapheni izilonda nasempukeni ye-bronchial.
Esikhathini semithi esemthethweni, i-physalysis ayisetshenziswanga nhlobo, kodwa izifundo zayo zezokwelapha zenziwa, okwathi ngemva kwalokhu kwaqalwa ukuthi izithelo zawo empeleni zinomphumela wokushisa futhi ukuchithwa kwamafutha e-calyx yayo kuphulukisa ngokuphelele izicubu.
Odokotela bacebisa iziguli ekudleni okunomsoco ukuze basebenzise izithelo ezivuthiwe zalesi sitshalo: ngesifo sikashukela, umfutho wegazi ophakeme, i-cholecystitis engapheli, isilonda se-12-типертной isisu nesisu, kanye ne-gastritis ye-hypoacid.
Isithelo esikhulu se-fzalisa sidla izingcezu ezingu-4-8, ezincane - 10-15, imizuzu engu-10 ngaphambi kokudla. Uma kwenzeka ukwanda kwe-asidi yesisu, umthamo kufanele unciphise ngesigamu ngokunyuka kancane kancane, usebenzisa izithelo ngaphambi kokudla. Kuleyo ngxenye yesitshalo ekhula ngaphezu komhlaba, kune-alkaloids, okubhekwa njengeyingozi, ngakho-ke akunakwenzeka ukuyisebenzisa ekhaya, ngoba kungaba yingozi.
Iqiniso mayelana nama-contact lens
I-frostbite ne-hypothermia yomzimba
Iziphi izifo ezingase zenzeke ngokweqile?
Umjikelezo wokuya esikhathini: ukuthembela ezintweni ezihlukahlukene
Ummbila omnandi: izakhiwo eziwusizo
Ukupheka ama-pancake nobisi: zokupheka zakudala nezokuqala zokwenza ama-pancake amnandi
Iresiphi "I-Okroshka ku-yogurt"
Ukuthandana kwehhovisi: kuhle noma kubi?
Izifundo ezenzekayo zokwenza amehlo amakhulu
Izindinganiso ezintsha zobuhle besifazane: amashiya aluhlaza kanye namahle
Casserol kusuka amazambane amnandi
Izembatho ezivela eMouton, Winter 2015-2016: Indlela yokukhetha i-Muton idayethe
Imiphumela yomncintiswano ngo-Mashi 8 ukusuka kuLamoda
Izitsha zokudla zaseRashiya - ama-pancake nge-saumon, zokupheka nezithombe